saturngod | Saturngod
Author Archives: saturngod
Mobile Apps Development : Part 5
Leaveareply iOS ကို ကျွန်တော် Standford iTune U ကနေ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးသွားရုံးပြန် Bus ကားပေါ်မှာ iPod Touch နဲ့ လေ့လာဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ Ornagai App ကို စပြီးရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ iOS Development အခုအချိန်မှာ လေ့လာစရာ နေရာတွေ အများကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော် စလေ့လာကာစ လေ့လာစရာဆိုလို့ iTune U , Apple iOS Developer Website လောက်ပဲ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး အချို့ blog တွေပေါ့။ သီးသန့်ကြီး iOS development အကြောင်းရေးတာ မတွေ့မိဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ iOS development ပိုင်းတွေ လေ့လာစရာ website တွေ အများကြီး ရှိနေပါပြီ။
ပထမဆုံး ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အကြံပေးချင်တာက ကိုယ် project လုပ်ချင်တာလဲ အရင် စဉ်းစားပါ။ ဘာ project မှ လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတာ မရှိရင်တော့ iOS Development လေ့လာပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ လေ့လာဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လေ့လာပြီး ဘာမှ ရေးစရာ မရှိတဲ့အခါ အတွေ့အကြုံလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
ပထမဆုံး အခြေခံကနေ advence level ထိ သင်ပေးတဲ့ Standford က iTune U ကို နေ့တိုင်း ကြည့်သင့်တယ်။ သူပေးထားတဲ့ Tutorial တွေကို လိုက်လုပ်ပါ။ တကယ်လို့ အလုပ်တဖက်နဲ့ မအားဘူး ဖြစ်နေခဲ့ရင် ကိုယ့် ဖုန်းထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် Tablet ထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် ထည့်ပြီး ကြည့်ပါ။ လိုက်မရေးနိုင်ရင်တောင် အစ အဆုံး ပြီးအောင် ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် iOS နဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လိုရေးလို့ ရမလဲ။ ဘယ်လို ရေးသင့်လဲဆိုတာကို သိနိုင်တယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged iOS on May 24, 2013 by saturngod. Mobile Apps Development : Part 4
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, iOS on May 5, 2013 by saturngod. Link
Ornagai 2.1.3 Download From Play Store
- Fixed Back button to exit at home screen
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 May 4, 2013
Leaveareply Mobile Apps Development : Part 2
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged Android, dev, iOS, mobile on April 29, 2013 by saturngod. Copy , Another Cloud Storage
Leaveareply သင့်ရဲ့ Dropbox ပြည့်သွားလို့ Sync လုပ်လို့မရတော့ဘူးလား ? ဒါမှမဟုတ် space ပိုများပြီး free ရတဲ့ storage ကို ရှာနေတာလား ? ကျွန်တော့် အနေနဲ့ Copy.com ကို စမ်းသုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Copy.com က dropbox လိုမျိုး cloud storage တစ်ခုပါ။ Storage space ကို Registration လုပ်လုပ် ခြင်း 5GB 15GB ပဲ ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Referral link နဲ့ လုပ်ရင် user အသစ် က 5GB ရပြီးတော့ link ပေးတဲ့ လူက နောက်ထပ် 5GB ရပါတယ်။ ဥပမာ။ https://copy.com?r=8oVB4A နဲ့ register လုပ်ရင် register လုပ်တဲ့လူက5GB ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က 5GB free ထပ်ရပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Review and tagged cloud, storage on April 28, 2013 by saturngod. Post navigation